Medicine Hat[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Lethbridge[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Waterton Lakes National Park[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Drumheller[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Calgary[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Red Deer[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Rocky Mountain House[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Camrose-Lloydminster[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Elk Island National Park[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Edmonton[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
St. Paul[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Athabasca[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Slave Lake[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Grande Prairie[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Wood Buffalo National Park[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Vancouver Island[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Pacific Rim National Park Reserve[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Avalon Peninsula-St. John's[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
South shore-Channel-Port aux Basques[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Bay of Islands/White Bay-Corner Brook[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Central-Grand Falls-Windsor[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Bonavista Bay and Peninsula-Clarenville[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
North coast-Lewisporte[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Northern Peninsula-St. Anthony[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Gros Morne National Park[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Labrador[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Northwest Territories[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Nunavut[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Nunavut (Arctic Islands)[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Qikiqtaaluk[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Yukon[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Saint-Pierre et Miquelon[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Saint-Pierre[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Alaska[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Anchorage[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Juneau[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Kenai Peninsula[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Ketchikan Gateway[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
North Slope[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Nome[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
St. Lawrence Island, Aleutians[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Prince of Wales-Outer Ketchikan[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Sitka[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Valdez-Cordova[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Campbell[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Fremont[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Park[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Washakie[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Campeche[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Campeche Bank[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Yucatán[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Rio Lagartos[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Sian Ka'an Biosph. Res.[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Cozumel Island[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Isla Holbox[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Corozal[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Estelí[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Alajuela[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Guanacaste[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Panama[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Chiriquí[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Panamá and Panamá Oeste[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Panamá[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Panama (Central)[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Bahamas[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Grand Bahama[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
West Grand Bahama[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Abacos Islands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Great Abaco[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Marsh Harbour[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
North Abaco[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
North Abaco (Great Abaco portion)[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Central Abaco[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
South Abaco[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Hope Town[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Green Turtle Cay[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Bimini/Berry Islands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Berry Islands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Nassau/Paradise Islands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Andros[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
North Andros[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Central Andros[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
South Andros[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Eleuthera/Harbour Island[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
North Eleuthera[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Central Eleuthera[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
South Eleuthera[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Cat Island[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
The Exumas[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
San Salvador and Rum Cay[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
San Salvador[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Long Island[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Acklins/Crooked Island[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Acklins[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Crooked Island[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Ragged Island[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Cuba[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Mayabeque[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Turks and Caicos Islands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Caicos Islands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Providenciales[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Providenciales Island[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Puerto Rico[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Arecibo[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Guayama[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Mayagüez[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Cabo Rojo[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Virgin Islands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
British Virgin Islands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Guadeloupe, Saint-Martin and Saint-Barthélémy[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Guadeloupe[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Pointe-à-Pitre[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Grande-Terre[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Netherlands Antilles[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Aruba[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Atlantica[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
San Andrés y Providencia[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
San Andrés Island[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Europe[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Greenland[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
West Greenland[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Palearctic[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Western Palearctic[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Nearctic[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Avibase သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး 287,102,731 24 ဇွန်လ 2003 ကတည်းကကြိမ်. © Denis Lepage | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ